Real Ever Myanmar - REM Tour Service Co.Ltd, Liberty Hotel,Paradiphat Road, Bangkok (2021)
หน้าหลัก > ประเทศไทย > Bangkok > การปฏิบัติตามกฎหมาย > Real Ever Myanmar - REM Tour Service Co.Ltd
Pro Booking Center
FaFa Travel โดย บริษัท ซอฟต์แวร์ไฟล
บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด 1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง
21/11 Soi Ladprao 15-2 ,Ladprao Rd.,Jompol,Jatujak
Our company located on Bangkok,Thailand.We're serving Tours & Relevancies of Travelling .Details on our Web page
company's service are Tour and Travel Agent .Such as-
* Ticketing ( International )
* Visa On Arrival (VOA)
* America Visa for Burmese
* Car Rental Services,* Guide Services
* Beauty Surgery Breast. Nose. S*x Change & Lips
Real Ever Myanmar - REM Tour Service Co.Ltd updated their info in the about section.
Today Breast Silicon Surgery
Mr Harry +66957249638 (Viber)
အရေးကြီး ဆေးရုံလူနာများ Bangkokသို့ဆေးကုသလိုပါက လာရောက်နိုင်ပါပြီ လိုအပ်တာအကုန်စီစဉ်ပေးပါမည်။
ဘန်ကောက်မှာ Tour နဲ့ အလှပြင် Surgery ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ပြုပြင်ချင်သူများဆက်သွယ်နိုင်ပါပြီ။ဒီPageကိုမအားလို့မတင်ဖြစ်တာပါ။ခုကစပြီးပြန်ကိုင်ပါပြီ။ကျွန်တော် Guide
Harry kyawပါ။သိချင်ဆက်သွယ်ချင်သူများ Viber နံပါတ်
+66845064830ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြပါ။အလည်ခရီးစဉ် ဆေးရုံပြ အကုန်အစအဆုံးသီးသန့် Private စီစဉ်ပေးပါတယ်။
R.E.M.ရဲ့မိတ်ဟောင်း၊ မိတ်သစ်၊ မိတ်မသစ်တသစ်တွေ အတွက်ရော အရမ်းမိုက် တဲ့ အစီစဉ်လေး ကိုပြော ပြ မယ်ဗျာ... မပျင်းစေရဘူးဗျာ အာမခံတယ်..
ကြားဖူးနေ ကျ စကား တစ်ခု ရှိပါတယ်။"စေတနာ ကောင်း မှ ကံကောင်းမည်" တဲ့ ဟုတ်ပါတယ် ဒါကြောင့် ကျွန်တော် လည်း ကံကောင်း ချင် လို့လုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှာစေတနာ ထားပါတယ်ဗျာ။ အကျိုး အမြတ်ကိုသိပ်ထည့် မတွက် ပါဘူး။
အစီစဉ်လေး ကို ပြန်ဆက်ရအောင်ဗျာ..
ကျွန်တော် ကတော့ ဒီအစီစဉ်လေး ကို စေတနာ tour လို့နာမည်ပေးထားတယ် ခင်ဗျ။ အခုလို ခရီးသွား ရာသီမျိုး မှာ ဒီလောက် ကောင်း ဒီလောက် သက်သာတဲ့ tour package မျိုး နောက် ထပ် ရှိရင် ကျွန်တော် ဒီလုပ်ငန်း လုပ် မစား တော့ဘူးဗျာ။ အဲ့လို ပြောလို ရွှေမြန်မာတို့က ထင်လိမ့်မယ် ညွှန်းလှချည် လားလို့ 
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော် ညွှန်း ပါတယ်
USD 266 (မြန်မာငွေ ၄ သိန်း) တည်း နဲ့ဘန်ကောက် မြို့ တွင်း မြို့ ပြင် နဲ့ပတ္တရားကမ်းခြေကိုပါ ပို့ ဆောင်ပေး မှာပါ ဗျာ။ လိုက်ပို့ ပေး မဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန်က နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကြီး ဖြစ်တဲ့ Detective China town မှာ စကား ပြန် လုပ်ခဲ့တဲ့ "ကို Harry Kyaw " ပါ။ ခုနက ကျွန်တော်ပြောတဲ့ 266$ ထဲမှာ ၃ည အိပ် ၄ ရက် ခရီးစားရိတ် နဲ့ ဟိုတယ်ခ လည်း ပါပြီးသား ခင်ဗျ။ နောက်ပြီး Ygn~Bkk အသွား အပြန် လေယာဉ်လက်မှတ်နဲ့၎ ရက်စာ ဧည့် လမ်းညွှန် ခ လည်း ပါတယ် ဗျ။
>>20/03/2019 မနက်မှာ Bkk ကို flight စီးမယ် BKK ရောက်တာနဲ့Pattaya ကမ်းခြေ ကို တန်းသွားမယ်ဗျ ဟိုရောက်ရင် white sand မှာ ရေသွားကူးမယ် ညနေ စောင်း မှ ပြန်လာမယ်ဗျာ.. ဒီဘက်ကမ်း ရောက်တာ နဲ့ walking street မှာ လျောက်ကြည့်ပြီး ဗိုက်ဖြည့်မယ် gay show လေး လည်း ကြည့် လိုက်အုံးမယ်ဗျာ။
အဲ့ဒီမှာ အဲ့လို နဲ့ တည ကုန်သွား ပြီး ရင်
>>21/03/2019 မနက် Bangkok ကို ပြန်လာမယ် ဟိုတယ်မှာအထုပ်တွေ ချ ပြီးတာနဲ့ shopping သွားမယ်ဗျာ.. စင်တာအစုံ ကို လိုက်ပို့ ပေးမှာ..
>>22/03/2019 မှာက တစ်နေကုန် ဘုရား အစုံဖူးကြမယ်နော့ ...
>>23/03/2019 ကတော့ စနေနေ့ လေး ဖြစ်တာကြောင့် စောစောစီးစီးလေး Safari World ကို သွားလိုက်ကြမယ်ဗျာ ညနေ လောက်ထိ ဟိုဟို ဒီဒီ လေး တွေ လည်း လျောက်သွားကြမယ်။ အဲညရောက်ရင်တာ့ ရန်ကုန်ပြန်ဖို့လေဆိပ်အထိလိုက်ပို့ ပေးမယ်ဗျာ... ကဲရွှေမြန်မာတို့ ရေ 266$ ကတန်ရဲ့ လားဗျာ ... တန်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းလေးတချက်ဆက် ပြီး စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ ဗျာ.....09421140926 ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်း လို့ ရပါ တယ်ခင်ဗျာ။ အော်.. ပြောဖို့ တစ်ခု မေ့သွားတယ် 18/03/2019 နောက်ဆုံးထား ပြီး စာရင်းသွင်း ပေးကြပါခင်ဗျာ..
adminတို့ tourမှာ ဒီလိုguideမျိူးရှိပါဘူးနော်...
Bangkok Pattaya3Nights/4Days ဈေးအသက်သာဆုံး Budget Tour အစီအစဉ်လေးပါ
ခရီးစားရိတ် နှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်ခ အပါအဝင် တဦးလျှင် အပြီးစီး မြန်မာ ငွေ ၄သိန်းကျပ်တည်း နှင့်ခေါ်ဆောင်သွားမှာပါ။ဆေးစစ်ချင်သူMedical Check Up လုပ်ချင်သူများကိုလည်းနောက်ဆုံးရက်တွင်သီးသန့်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်။
ဘန်ကောက်.ဘုရားစုံဖူးရန်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်။ ပတ္တရားကမ်းခြေ မှာ တစ်ညအိပ် ပါ့မယ်။ ဈေးဝယ် စင်တာကြီး တွေ မှာ ဈေးဝယ် ဖို့လည်း လိုက်ပို့ ပါမယ်။
သွားချင် တဲ့ တချို့ နေရာတွေ ရှိရင် လည်းဝင်ကြေး မိမိဟာမိမိပေးပြီးဝင်နိုင်ပါတယ်။ခရီးစဉ်ထဲမှာ ဝင်ကြေး တွေ ထည့်မကောက်ထားပါဘူး။ အများ နဲ့ ဖြစ်တာကြောင့်သွားချင်သည့်သူများရှိသလို မသွားချင်သူများလည်းရှိသည့်အတွက် ခရီးစဉ်ကိုအရှင်စီစဉ်ထားပါတယ်။ လိုက်ပါ ပို့ ဆောင် မည့် Tour Guide က Bangkok Guide လောက ရဲ့နာမည်ကျော်
"Ko Harry Kyaw " ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး စာရင်း ပေး သွင်း သူ အယောက် ၂၀ နဲ့စထွက်မှာပါ။
>> 20/03/2019 ရက်နေ့ မနက် ရန်ကုန် မှ ဘန်ကောက် ကို စထွက်မယ်
>> 20/03/2019 ရက်နေ့Pattaya တစ်ည အိပ်
>> 21/03/2019 ရက်နေ့Bangkok ဘုရားစုံ ဖူး
>> 22/03/2019 ရက်နေ့Shopping
>> 23/03/2019 ရက်နေ့ မနက်ပိုင်း ကို Medical Check Up လုပ်တာ တို့ ဟိုဟိုဒီဒီ သွားတာလေးတွေ လုပ်လို့ ရပါတယ်
>> 23/03/2019 ရက်နေ့ ညနေ ကတော့ လေဆိပ်မှာဂFlight Check in Bangkok to Yangon ပါ။
ဒီနေ့က စပြီး စာရင်းပေးသွင်းလို့ ရနေ ပါ ပြီ 17/03/2019 ရက်နေ့ 11:00 am
GU GU Trading
GU GU Trading Co.,ltd page မှ ကြို ဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ..
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ Page ကို Like, Comment, Share လုပ် ရုံ ဖြင့် Lucky Draw အစီစဉ် မှာ ပါဝင် ကံစမ်းလိုက်ကြပါစို့ ခင်ဗျာ...
1>Pageလေးကို like &share လုပ်ပေးပါ
2>မိမိ Like & Share လုပ်ထားတာ လေးကို Screen shot လုပ်ပီး commentပေးပါ။ comment မှာ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အင်္ဂလိပ် ဂဏန်း ၄ လုံး ကို ရေး ပေး ပါ ခင်ဗျာ ..( ဥပမာ- 1234 )
3> နောက်ဆုံး အဆင့် က တော့ ဒီ post ကို public share ပေး ရုံပါပဲ။
ဒီ အဆင့် ၃ ခု ကို လုပ် ပြီး ပြီ ဆိုရင် တော့ မိတ်ဆွေ တို့ အနေနဲ့၃၁. ၃. ၂၀၁၉ ရက်နေ့ မှာ ကြေငြာ ပေးမယ့်
ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ Lucky Draw အစီအစဉ် မှာ ပါဝင် ကံထူးခွင့် ရရှိသွားပါပြီ ခင်ဗျား။
💲အမြင့်ဆုံး ငွေသား ဆု က ၅ သောင်း ကျပ် ပါ။ အခြား ငွေ သားဆု မဲ များ နဲ့ကျွန်တော် တို့ ကုမ္ပဏီ က ရောင်း ချ နေတဲ့ Electronic Products လေး တွေ ကိုပါ ကံစမ်း ပေး သွား မှာပါ ခင်ဗျာ...
ဒါ ကြောင့် like, comment & share လုပ် ပြီး အခုပဲ ကံစမ်း လိုက်ကြ ပါစို့ လားခင်ဗျား...
Gain From Perspective
Please Like, Share & Comment 🙂
19 Oct 2017 မှ 23 Oct 2017ထိ အထူး ဘန်ကောက် ကမ်ဘောဒီးယားခရီးစဉ်ပါ။
ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ထူးဆန်းသော နေရာတခုဖြစ်တဲ့ အန်းကောဝပ်ဘုရားကျောင်းအတွင်း လည်ပတ်မည့်ခရီးစဉ်ပါ Bayon Temple / Taprohm ဘုရားကျောင်း နှင့် Tom Rider 3ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများရိုက်ကူးခဲ့သောနေရာများကိုသွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Bangkokမှာလည်း ၂ညအိပ်မှာမို့လို့ ဧည့်သည်များအနေနှင့်လည်းစိတ်ကြိုက်ဈေးဝယ်မည့်အခွင့်အရေးရပါမယ်။
ခရီးစဉ်အနေနဲ့ကတော့ 19 Oct 2017 နံနက်မှာ ရန်ကုန်မှဘန်ကောက်သို့လေယာဉ်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီးဘန်ကောက်တွင်မြန်မာဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆို၍ ဟိုတယ်နေရာချထားပေးကာ shopping ခရီးစဉ်များခေါသွားပါမည်။ 20 Oct 2017နံနက် မှာတော့ ဘန်ကောက်မှကားများဖြင့် ထိုင်း ကမ်ဘောဒီယားနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီး ဆီရမ်ယီပ်မြို့သို့သွားရောက်မှာဖြစ်ပါသည် ။ထိုနေ့ညဘက်တွင် ကမ်ဘောဒီးယား International buffetဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံပါမည်။
21 Oct 2017နေ့မှာတော့နာမည်ကျော် အန်းကောဝပ်ကျောင်းကြီးသို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ 22 Oct 2017မှာတော့ ဘန်ကောက်သို့ပြန်ကာ ဟိုတယ်တွင်အနားယူရင်းညဈေးသို့ ပို့ဆောင်ပါမည်။ 23 Oct 2017တွင်လည်း ဧည့်သည်များအားစိတ်ကြိုက်ဈေးဝယ်ခွင့်ပေးကာ ညနေ Flightဖြင့် ဘန်ကောက်မှရန်ကုန်သို့ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
ခရီးစဉ်တလျှောက်လုံးတွင် ဧည့်လမ်းညွှန်Guideပါရှိမှာဖြစ်ပြီး ကမ်ဘောဒီးယားမှ မင်းသမီး Anjalina Joeliရဲ့ Tom Riderဇာတ်ကားရိုက်ကူးရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် Cambodia Guide Mr Vensau နှင့် ဘန်ကောက်မှ နာမည်ကျော် မြန်မာGuide ko Harry kyawတို့မှဦးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Bangkok2Night / Cambodia2Night ပေါင်း4Night5Day အထူးခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ် ဈေးနှုန်းအသက်သာဆုံးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
Flight Tickets အပါအဝင် ခရီးစဉ် စ/ဆုံး တဦးလျှင် $400ဖြင့် Helper Travel & Tour မှာစာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျ။ မန္တလေးမှလာမည့်ဧည့်သည်များလည်းစာရင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရန် Helper Tour Company မှ ကိုမင်းဟိန်းကို 09785586747အားဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းစာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
R.E.M Tour မှ ရွှေမြန်မာခရီးသွားများအတွက် အကောင်းဆုံး၊ အပျော်ရွှင်ဆုံး၊ ဈေးအသက်သာဆုံး Tour Packagesများ စီစဉ်ပေးနေပါပြီ။
( October, November, December ) High season အတွက် ဘန်ကောက်မြို့သို့ ၃ညအိပ် ၄ရက် (3N/4D)Package အသစ်ဖြင့် အပန်းဖြေ၊ ဈေးဝယ်၊ အနားယူနိုင်အောင် R.E.M Tour ကို အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ ရန်ကုန်-ဘန်ကောက် အသွားအပြန် လေယာဉ်လက်မှတ် အပါအဝင် အဆင့်မြင့်3Stars Hotel ကြီးတွင် ၃ညတာတည်းခိုခွင့်နှင့် နံနက်စာတို့ပါဝင်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးလျှင် Package Price ( USD-428 or Bahts- 16,285) မြန်မာငွေ ၅၇၀,၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ဈေးအသက်သာ ဆုံးစီစဉ်ပေးထားသော ဤခရီးစဉ်အတွင်းမှာ မြဘုရား၊ လေးမျက်နှာဘုရား၊ ရေပေါ်ဈေး၊ ပတ္တရားကမ်းခြေ တို့အပြင်..... MBK, Siam Paragon, Pratunam အစရှိတဲ့နာမည်ကြီး ကုန်တိုက်တွေမှာ Shoppingသွားကြမယ်။ အခြားအခြားသောပျော်ရွှင်စရာ အစီအစဉ်များကိုလည်း REM Tour မှ အရမ်းတန်တဲ့ ဈေးနှုန်းဖြင့် အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှူပေးနေပါပြီ
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ခရီးစဉ်တွက် REM Tour ကို အမြန်ဆုံးဆက်သွယ် လိုက်တော့နော်။ ဘန်ကောက်ကိုမှ အပန်းဖြေ ခရီးထွက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင် REM Tour မှ
အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပါပြီရှင်။အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက message ဖြင့် မေးမြန်း နိုင်ပါတယ် ။
Ygn Ph: 09795396879
Bkk Ph: +66 94 909 9942
Viber: +66 94 909 9942
Real Ever Myanmar-REM Tour Service Co.,ltd
Liberty Hotel, Paradiphat Road, Bangkok
ရွှေမြန်မာများ ခင်ဗျား ....
Real Ever Myanmar - REM Tour Service Co.Ltd မှထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ တွင်းခရီးသွား ၀န်ဆောင်မှု များ အပြင်၊ အမေရိကန် နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများ သို့ သွားရောက်လိုသူများအတွက်ဗီဇာများရရှိအောင် ဆောင်
ဖုန်း (66) 949099942
Email: [email protected] သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Visa Thailand and Workpermit